के जाका मा हेर्न को लागी, एक ऐतिहासिक र स्मारक शहर | यात्रा समाचार
लुइस मार्टिनो | | स्पेन शहरहरू, के हेर्ने
यदि तपाईं ह्वेस्का प्रान्तमा यात्रा गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई अर्काइन्सी समुदायको उत्तरमा पर्ने पिकालिस र इतिहासले भरिएको जाकामा के हेर्ने होला भनेर सोच्नुभएको होला। वास्तवमा यो थियो अरागोन काउन्टीको पहिलो राजधानी र यो मध्य युगमा ठूलो भव्यताका साथ बाँच्यो। यी सबै मध्ये, त्यहाँ धेरै स्मारकहरू छन् जुन तपाईं आज हेर्न सक्नुहुन्छ।
तर तपाईंसँग केवल जाकामा हेर्न ऐतिहासिक भवनहरू छैनन्। यो पहाडहरू र रिसोर्टहरूको माध्यमबाट पैदल यात्रा र स्कीइ practiceको अभ्यास गर्नको लागि पनि उत्तम स्थान हो पाइरेनीज। एक शानदार ग्यास्ट्रोनोमी Jacetan शहर को पर्यटन प्रस्ताव पूरा गर्दछ। यदि तपाईं यो जान्न चाहानुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई हाम्रो अनुसरण गर्न आमन्त्रित गर्दछौं।
1 एक स्मारक शहर जाकामा के हेर्ने
1.1 सैन पेड्रो क्याथेड्रल
1.2 गाउँ, यो जाका मा देख्न पहिलो चीज हो
1.3 रापिटन किल्ला
1.4 घडी टावर
1.5 सान जुआन डे ला पेनाको मठ
1.6 जाकामा हेर्नका लागि अन्य स्मारकहरू
2 जाका ग्यास्ट्रोनमी
3 जाकाको भ्रमण गर्नु कहिले राम्रो हुन्छ
4 जाका कसरी पुग्ने
एक स्मारक शहर जाकामा के हेर्ने
दुबै शहर आफैं र यसको वरपर एक छ धनी धार्मिक र नागरिक सम्पदा चर्चहरू द्वारा गठन गरिएको जुन तिनीहरूको रोमनस्क विलासी, मठ, टावरहरू, गढीहरू र रेलवे स्टेशनहरूको लागि पनि खडा छ। यसको भ्रमण गरौं।
सैन पेड्रो क्याथेड्रल
आदेश द्वारा ११ औं शताब्दीमा निर्मित सान्चो रामेरेज, Aragon को राजा, मानिन्छ पहिलो रोमान्सक स्पेनमा निर्मित। वास्तवमा यसको निर्माण निकटसँग सम्बन्धित छ स्यान्टियागोको सडक, जो जाका माध्यम बाट जान्छ।
यसमा एक बासिलिका योजना छ, तीन लामो न्भियाहरू सहित जुन धेरै अर्धवृत्ताकार apses, दुई पहुँच ढोकावाट स्तम्भहरू र क्यापिटलहरू, र पातलो गुम्बजमा अन्त हुन्छन्। जिज्ञासाको रूपमा, ढोकामा खोपिएका मूर्तिहरूमध्ये, त्यहाँ एक धेरै अनौंठो छ। छेउमा तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ जाकिज रड, एक मापन जुन मध्य युगमा प्रयोग भएको थियो र त्यो 77 XNUMX सेन्टीमिटर बराबर थियो।
अर्कोतर्फ, क्याथेड्रल भित्र तपाई भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ म्यूजियो डियोएस्सानोजहाँ तपाई ह्युस्का प्रान्तमा बिभिन्न गिर्जाघरहरुमा भेटिने महान मूल्यका रोमान्स्क चित्रहरु देख्नुहुनेछ
गाउँ, यो जाका मा देख्न पहिलो चीज हो
पनि भनिन्छ सान पेड्रोको महलयो १ for औं शताब्दीमा शहरको लागि एक रक्षात्मक गढीको रूपमा निर्माण गरिएको थियो। यो सीमा सुरक्षाको नेटवर्कको केन्द्रिय केन्द्र थियो जुन अन्स्, सान्ता हेलेना र हेको जस्ता टावरहरूको साथ पूर्ण भएको थियो।
एउटा विशाल निर्माणमा जुन केन्द्रीय आंगन हो जुन वरपरको निर्भरताहरू जस्तै गोदामहरू, ब्यारेकहरू, कार्यालयहरू र चैपल वितरित गरिएको छ। ती मध्ये एउटामा तपाई एउटा जिज्ञासुलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सैन्य लघुचित्रहरूको संग्रहालय.
१ th औं शताब्दीमा निर्मित, यो पनि एक बचाव समारोह थियो। यसले समान नामको पहाडबाट दृश्यमा प्रभुत्व जमाइरहेको छ, १,१०० मिटर भन्दा धेरै अग्लो। एक हो विशाल किल्ला लगभग छत्तीस हजार वर्ग मीटर को, जिज्ञासापूर्वक, सतह मा लगभग भूमिगत रूपमा लगभग विस्तार छ।
यस्तो पनि भनिन्छ जेल बाट किनकि यसले यस प्रकार्यको लागि काम गर्‍यो, यो सिभिल गोथिकको नमूना हो, जुन आयताकार भुइँ योजना र अर्धवृत्ताकार आर्च मुनि ढोका छ।
को imposing चट्टान द्वारा कभर Pano माउन्ट गर्नुहोस्, १० औं शताब्दीदेखि क्षेत्रीय इतिहासको साक्षी रहेको छ: अरगोनका प्रथम राजाहरूलाई त्यहाँ गाडिन्छ। मठमा तपाईंले भ्रमण गर्नु पर्ने अन्य स्थानहरू रोमान्स्क बाह्य क्लस्टर हो सैन विक्टोरियोनको गोथिक चैपल र पछि रोयल पन्थ्यान, neoclassical शैली।
जाकामा हेर्नका लागि अन्य स्मारकहरू
नागरिक सम्पदाको लागि, तपाईं पनि जाकामा यस भवनको देख्न सक्नुहुन्छ टाउन हॉल, १te औं शताब्दीमा प्लेटारेस्क शैलीमा निर्मित; को आर्चीपिस्कोपल दरबार, सत्रौं र बाट सैन मिगुएल पुल, मध्ययुगीन समयबाट केहि मध्ये एक जुन अरगानको उत्तरमा संरक्षित छ।
तर यस क्षेत्रमा सबै भन्दा प्रभावकारी नागरिक निर्माण हो Canfranc रेलवे स्टेशनजुन १ 1928 २XNUMX मा उद्घाटन गरिएको थियो र त्यो समय यूरोपमा लाइपजिग पछि दोस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो। यो महत्वाकांक्षी परियोजनाको हिस्सा थियो सोमपोर्ट सुरुnel, जसले स्पेन र फ्रान्सलाई संचार गर्‍यो।
धार्मिक वास्तुकलाको सन्दर्भमा, तपाईं जाका र वरपरका अन्य चर्चहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ सान एड्रिआन डे सासाबे, सान्ता मारिया डे इगुएसेल वा सान क्याप्रसिओ। तिनीहरू सबै एक शानदार रोमान्स्किक सम्पदा बनाउँछन्।
एकचोटि हामीले जाकामा तपाईले के हेर्नु हुन्छ को समीक्षा गरे पछि हामी यसको ब्यास्ट्रोनोमा मजा लिदै हाम्रा ब्याट्रीहरू रिचार्ज गर्नेछौं। यसले क्षेत्रको मौसम अवस्थालाई प्रतिक्रिया गर्दछ, लामो र चिसो जाडोको साथ, यसैले यसमा उच्च क्यालोरी सामग्री छ। तिनीहरू पनि क्षेत्र को पशुपालन र कृषि संस्कृति प्रतिक्रिया।
यो सामान्य हो भेडा वा जवान भेडा जो भुटेको छ। ठीक यो को हिम्मत संग, chiretas, जो पशुको आफ्नै भिसेरा र चामलले भरिएका छन्। मासु मध्ये, तपाईं पनि कोशिस गर्न सक्नुहुन्छ गोमांस फिललेट एक l'Alforcha र अखरोट चटनी संग स्टिउड जंगली सुअर.
बाकालाव अल अजोएरियरो
माछा को रूपमा, बाकालाव अल अजोएरियरो, जुन लसुन, प्याज, आलु, खुर्सानी र टमाटर संग तैयार छ। बढी बलवान छन् अण्डाहरू संग crumbs, जससँग लोगनिजा वा चोरिजो, लसुन, तेल र प्याज छन्।
अन्तमा, डेसर्टको बारेमा, जाका पेस्ट्री प्रसिद्ध छ। यसको विशिष्ट उत्पादनहरू मध्ये, तपाईं प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ क्रिस्पिलोस, जो अण्डा, दूध, चिनी, पीठो र सौंफले बनेको छ; को jaqueses र सान्ता ओरोसियाको सानो मुकुट.
जाकाको भ्रमण गर्नु कहिले राम्रो हुन्छ
हामीले पहिले नै उल्लेख गरिसकेका छौं कि जाकामा मौसम चिसो छ, औसत वार्षिक तापमानको साथ केवल दस डिग्री भन्दा बढी छ। यद्यपि यो प्रकारको मौसम हो कन्टिनेन्टल त्यसैले त्यहाँ जाडो र गर्मी को बीच ठूलो फरक छन्।
पहिलोमा, तपाई शून्य भन्दा पाँच डिग्री तलको तापक्रम भेट्टाउन सक्नुहुनेछ, जबकि दोस्रो समयमा तिनीहरू शून्य भन्दा exceed० भन्दा बढी जान सक्दछन्। थप रूपमा, दुबै जाडो र वसन्त र शरद itतुमा अधिक वर्षा हुन्छ र चिसो महिनाहरूमा हिउँ प्रशस्त हुन्छ। तसर्थ, तपाइँ जाका भ्रमण गर्नका लागि उत्तम समय हो गर्मी.
जाका कसरी पुग्ने
हामीले तपाईंलाई जैकामा के हेर्ने र के खानको बारेमा कुरा गरेका छौं। तर यो पनि महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंलाई त्यहाँ कसरी पुग्ने जान्नुहोस्। तपाईं यो को लागी गर्न सक्नुहुन्छ रेलवेकिनकि त्यहाँ एक रेखा छ जुन शहरलाई जारागोजासँग जोड्दछ। त्यस्तै, त्यहाँ छन् बसहरु जसले यसलाई अर्गोनियन राजधानी र स्पेनको अन्य भागहरूसँग सञ्चार गर्दछ।
यदि तपाईं आफ्नै कार प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने पूर्वबाट तपाईं आइपुग्नुहुनेछ N-260 र पश्चिमबाट N-240। अर्कोतर्फ, दुबै दक्षिण र उत्तरबाट, सडक हो ई-7.
निष्कर्षमा, तपाईंले जाकामा देख्नु पर्ने कुरा धेरै छ: प्रशस्त र बहुमूल्य स्मारक सम्पदा र भव्य परिदृश्य, यसको स्वादिष्ट ग्यास्ट्रोनोमीलाई बिर्सिएन। के तपाईं अर्गोनी शहर जान्ने हिम्मत गर्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » स्पेन शहरहरू » जाकामा के हेर्ने
क्युबाको लागि यात्रा